Djibouti Nature | Isku-sidiga dadka iyo dabeecadda
Ku soo dhowoow Djibouti Nature
. Baalka hore
Halka aan u soconno
Fadlan wax ku darso
Ururka Jabbad-Dabeecadeedka Jabuuti (marka la soo gaabsho: ADN) waa urur madaxbannaan (ama haayad sama-fal) oo xubin ka ah oo aan saldhig u lahayn, oo sharci ahaan lagu aasaasay Jabuuti. Dabeecadda Jabuuti ayaa la aasaasay sannadkii 1999-kii taas oo ah ururkii ugu da’da yaraa ee waaya-aragnimada bulshada ee ka shaqeeya ilaalinta dabiiciga ah ee dalka.
Waxay leedahay taariikh muhiim ah, laakiin taariikhda gaaban ee ilaalinta dabiiciga ah badiyaa laga helo noocyada hiddaha iyo dabeecadaha dabiiciga ah. Ka sokow, waxa ay si xamaasad leh ula shaqeyn jirtay beelaha maxalliga ah, qaybaha gaarka loo leeyahay iyo hay’adaha dawladda sannado badan si ay kor ugu qaadaan wacyigelinta duurjoogta aan caadiga ahayn ee duurjoogta iyo degaannada qaaliga ah ee ilaalinta ee faa’iidada jiilalka hadda iyo mustaqbalka.
Waxaannu hadda ku guo-jirnaa dib-u-habaynkele oo laxaad le oo la-xidhiidha websaytkani siduu u shaqeeyo iyo waxa ku dhigan, labadaba. Si ay dad intan ka balaadahni u dhex-geli-karaan websaytkan, waxaanu ku soo kordhinnay afaf kala duwan.
Hase yeeshee, awoodayada shaqaale iyo tan dhaqaale oo aad u kooban ayaan noo suurto gelin inaan dhamaan afafka wadani ah ku wada darro websaytkan. Hadda, waxaannu ku bilawnay af-Ingiriis, af-Soomali iyo af-Faransiis. Inta badan, waxaannu adeegsannay Google Translate markaan turjumaadda samaynaynay. Waxa shaaca ka cad inaan Google Translate ku fillayn hawshaa ballaadhan; waxayse ka bixisaa fikrad guud wixii lagu turjumo. Aad baan ugu dadaalaynaa sidii aannu uga gudbi lahayn halkaa. Dhankaa, dhan dhe!
Ta kele, waxaan aad ugu baahanahay dad naga taakulleeya sidii aan ugu dari lahayn afafka wadaniga ah sida af-Cafarta iyo af-Carabiga. Markaa, haddii aad is-leedahay in uumbaad wax la-qaban kartaa ADN hawsha baaxadda le ee ay waddo, fadlan, nala soo xidhiidh.